जब मैले थारु बोल्न जानिनँ
नेपाल लाइभ शनिबार, साउन ३२, २०७६, १५:३०:००
'का बा हाल खबर, का करटो?'
गाउँघरबाट आउने पाहुनाहरु यसरी नै थारु भाषामा कुरा गर्न खोज्थे। उनीहरुले बोलेको बुझ्थेँ तर थारुमै फर्काउन आउँदैनथ्यो मलाई। अनि जवाफ दिनुपर्थ्यो- खस नेपाली भाषामा।
आमाबुवाले मुस्कुराँउदै भन्नुहुन्थ्यो, 'सानैदेखि सहरमा बस्यो, थारु अलिअलि बुझ्छ, बोल्नचाहिँ आउँदैन।'
आफ्नो सन्तानलाई मातृभाषा आउँदैन भनिरहँदा मेरा अभिभावकलाई हिनताबोध हुनपर्ने हो तर उल्टै गर्व पो गर्नुहुन्थ्यो! मैले पनि थारु नजानेकोमा गर्व गर्न थालेँ। अलिअलि जानेको थारु पनि केही नजाने जस्तो अभिनय गर्न थालेँ।
अन्य भाषा सिक्नैपर्ने अनि बोल्नैपर्ने आवश्यकता थियो। किनकि म सहरमा हुर्कें/बढेँ। तर आफ्नो मातृभाषा नै बिर्सनुपर्ने कुनै पनि बाध्यता थिएन मेरा लागि। साँच्चै भन्ने हो भने आफ्ना छोराछोरीलाई थारु बोल्नै आउँदैन भनेर एक किसिमले गर्व गर्न थालेका थिए, मेरा अभिभावकले। अझै पनि कतिले त गर्दा हुन्।
मातृभाषा प्रतिको मोह मलाई धेरैपछि मात्रै जागेको हो। कलेजको अध्ययनको सिलसिलामा म एउटा थारु गाउँमा पुगे। थारु नबोली नहुने। थारुबाहेक अन्य भाषा नबुझ्ने मानिस थुप्रै थिए, गाउँमा। खस नेपालीमा केही थारु शब्द मिसाउँदै जानीनजानी अन्तरंग कुराकानी गर्थें।
थारु मात्रै किन नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाका आफ्नै मौलिकता छन्। र, तिनको सुन्दर पक्ष भनेकै बोलीमा आफ्नै लबज र मिठासपन हो। भाषा सिक्न सकिएला तर बोलीमा आउने त्यो मौलिक लबज जतिसुकै पैसा तिरेर पनि सिक्न सकिँदैन।
काठमाडौं बस्दा कहिल्यै लागेन कि नेपालमा बसोबास गर्नेहरु नेपाली बोल्न जान्दैनन्। एक दिन नेपाली अलि राम्रै बुझ्ने व्यक्तिसँग म कुराकानी गर्दै थिएँ। पछाडिबाट एक युवतीको आवाज सुनियो। भनिन्, 'सहरमा बस्ने थारुले थारु बोल्न जान्दैनन् भनेर हामीले पनि कहिल्यै पनि सोच्न सकेनौं।'
आफ्नै मातृभाषा बोल्न नजानेकोमा अब मलाई हिनताबोध हुन थालेको थियो। अर्काको भाषा सिक्नु त सिक्नु तर यसरी कसैले नसिकियोस् कि आफ्नै भाषा बिर्सियोस्। आफूले बोल्न सक्ने भाषाको लिस्टमा जति धेरै भाषा थपिए पनि आफ्नै भाषा बोल्न नसक्नुमा अब मैले गर्व गर्ने ठाउँ कतै देखिनँ।
म सहरमा हुर्कें/बढेँ। गैर थारु समाजमा। जहाँ थारु भाषाले मात्रै काम चल्दैनथ्यो। तर आफ्ना आमाबाबुबाट समेत मैले थारु सिक्न सकिनँ। उहाँहरुको मान्यता थियो, छोराछोरीलाई थारु सिकाउन हुँदैन। जबर्जस्त मान्यता थियो सायद, थारु सिकायो भने उनीहरुको टोनमा पछिसम्म सुधार हुँदैन र 'ट' र 'त' छुट्याउन सक्दैनन्।
तिमीलाई 'टिमी' नै भने पनि त त्यो थारु गाउँको मौलिकतामा मैले थारुपनको स्वाद पाएँ। सहरमा बसेर नेपाली बोल्दा पनि जबर्जस्ती अंग्रेजी टोन ल्याउनेहरुसँग म त्यो थारु लबजको मौलिकता कतै पनि तुलना गर्ने ठाउँ देख्दिन। थारु मात्रै किन नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाका आफ्नै मौलिकता छन्। र, तिनको सुन्दर पक्ष भनेकै बोलीमा आफ्नै लबज हो। भाषा सिक्न सकिएला तर बोलीमा आउने त्यो मौलिक लबज जतिसुकै पैसा तिरेर पनि सिक्न सकिँदैन।
यसो गर्दा उनी भन्थिन्, 'ना लट्पटाउ ना।' वाह, यसको मौलिकता। उनलाई जिस्काइरहन मन हुन्थ्यो मलाई, र यो शब्द बारबार सुनिरहूँ लाग्थ्यो।
त्यो गाउँमा बस्दा म ती युवतीसँग नजिक हुन थालेकी थिएँ, जसले मलाई थारु बोल्न नजानेकोमा निकै हिनताबोध गराएकी थिइन्।
उनले मलाई गाउँ डुलाइन्। हामी सँगसँगै जंगल डुल्न गयौं, खोला गयौं। गाउँमा रहेको अटुवा चढ्यौं। उनी मसँग धेरैजसो थारु र कहिलेकाहीँ मात्रै नेपाली बोल्थिन्। नेपाली बोलिरहँदाको उनको थारु लबजको नेपाली मलाई सुनिरहूँ लाग्थ्यो। अनुहारले उनी कति राम्री थिइन् भन्दा पनि उनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै उनको बोलीको लबज थियो।
हामी नजिक पनि भइसकेका थियौ अब त। म उनीसँग जिस्किने भइसकेकी थिएँ। कहिले कपाल तान्ने त कहिले हातै तानिदिने सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। यसो गर्दा उनी भन्थिन्, 'ना लट्पटाउ ना।' वाह, यसको मौलिकता। उनलाई जिस्काइरहन मन हुन्थ्यो मलाई, र यो शब्द बारबार सुनिरहूँ लाग्थ्यो।
आफ्नो मातृभाषाप्रति पलाएको यो मोहदेखि कहिले त म आफै चकित हुन्छु। नेपाली, अंग्रेजी, स्पेनिस भाषाप्रति मेरो लगाव पहिलेदेखि नै थियो। कहिल्यै सोच्नै सकिनँ कि आफ्नो भाषा र त्यसका शब्दहरुले मलाई लठ्ठ बनाऊलान्। हुन पनि किन नबनाओस्, अरुका भाषाले दिमागसँग कुरा गर्छन् जब कि मातृमाषा सिधै दिलमा ठोक्किन्छन्।
शब्दहरु सुनेर कानले राहत पाउनु अनि तिनै शब्दहरुले मनमा डेरा जमाइरहनु मातृभाषाबाहेक अन्यमा यो शक्ति कहाँ?
बाध्य बनाइएका छन् त केवल बोल्नै नजानिने भाषाका किताब लेखपढ गर्न। ती बोल्नै नजानिने भाषाका बीचमा कमसेकम थारु बाहुल्य भएका विद्यालयमा 'क से करछुल, ख से खटिया' पढाइदिए कति राम्रो हुने थियो।
'मुनामदन' मैले सबैभन्दा धेरै पटक पढेको किताब हो। उसो त 'शिरीषको फूल' पनि थुप्रै पटक पढेकी छु। विशेषत: हाइस्कुल पढ्दा उपन्यास निकै पढिन्थ्यो। उपन्यासमा यति धेरै हराइन्थ्यो, हरेक उपन्यासका पात्र आफै हूँ जस्तो लाग्थ्यो। थारु उपन्यास कहिल्यै पढिनँ, भनूँ पढ्नलाई छँदै थिएन। थारु उपन्यास भइदिए, लाग्छ म थारु परिवेशमै हराउँथे। उल्था गरिएका किताबहरु पनि थारुमा नपाइने। आफ्नो भाषा बोल्न नजानेकोमा गर्व गर्ने समाजमा कसले थारुमा किताब लेखोस् वा कसैले लेखे पनि त्यो पढोस्!
आज म थारु बोल्न त सक्छु लेख्न सक्दिनँ। पढ्न सक्दिनँ। त्यो गाउँमै पनि थारु बोल्छन्। जति धाराप्रवाहका साथ तिनीहरु नेपाली पढ्न सक्छन्, थारु सक्दैनन्। सायद थारु भाषा केवल बोल्नका लागि मात्रै हो, पढ्नका लागि होइन। अझ भनूँ, पढ्नका लागि थारुमै लेखिएका प्रशस्त पुस्तक छैनन्। थारुमै लेखिएका कुरा पढ्न न त बाध्यकारी नै छन्। बाध्य बनाइएका छन् त केवल बोल्नै नजानिने भाषाका किताब लेखपढ गर्न। ती बोल्नै नजानिने भाषाका बीचमा कमसेकम थारु बाहुल्य भएका विद्यालयमा 'क से करछुल, ख से खटिया' पढाइदिए कति राम्रो हुने थियो।
(प्रकाशोन्मुख निबन्ध संग्रह 'निलम्बित निबन्ध'बाट)
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा क्षेत्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य नेता सहभागी हुने भएका हुन्। पार्टी... ३१ मिनेट पहिले
एल क्लासिको : परका दुई सहरको नजिकको भिडन्त रियल मड्रिड र बार्सिलोना परका सहर भए पनि भिडन्त एउटै सहरका दुई क्लबको भन्दा ज्यादा हुन्छ। जहाँ विश्वभरका फुटबलप्रेमी जोडिन्छन्। त्यह... ४१ मिनेट पहिले
बाँस्कोटाको दाबी-रकम लेनदेन गर्ने हिसाबले कसैसँग कुरा गरेको छैन ‘प्रतिवादीबाट सृजित कथित अडियो टेपमा कुनै सत्यता छैन,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘रकम लेनद... ५३ मिनेट पहिले
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा ३१ मिनेट पहिले
एल क्लासिको : परका दुई सहरको नजिकको भिडन्त ४१ मिनेट पहिले
बाँस्कोटाको दाबी-रकम लेनदेन गर्ने हिसाबले कसैसँग कुरा गरेको छैन ५३ मिनेट पहिले
अमेरिकी दूतावासको नक्कली म्यानेजर बनेर लाखौँ ठगी गर्ने पक्राउ १ घण्टा पहिले
‘सहकारी ऐन संशोधन हुन्छ, मुख्य कारोबारको विषय पनि टुंगिन्छ’– सहकारी मन्त्री अर्याल १ घण्टा पहिले